Ekhethekileyo: Maddox, Umnini we-Intanethi 'Elona Phepha liBalaseleyo eLuntwini' - Isiqingatha
Eyona Isiqingatha Udliwanondlebe olukhethekileyo: Dibana noMaddox, umnini we-Intanethi 'Elona Phepha liBalaseleyo kwiNdawo iphela'
(Ifoto: Surian Soosay / Flickr)
UMaddox unjalo umbhali wokuqala Ndiyakhumbula ndifunda kwiwebhu. Ukuba ufikile ebudaleni ngexesha lokuqala lokubhloga, usenokuba namava afanayo. Ukubhala kwakhe kunye nesimbo sakhe sasinempembelelo kwisizukulwana sababhali, oosomaqhula kunye noosomashishini bewebhu. Oko wasungula ngo-1997, wabona amakhulu ezigidi zabatyeleli, wavelisa ezona memes zakudala zewebhu, kwaye wathengisa itoni yeeeteki yee-metric. Uninzi lwazo zonke, ebehlala ehamba phambili kwigophe ngokweemodeli zeshishini ezikwi-Intanethi kwaye ebiza imikhwa yenkcubeko evela ukuthengisa okugabadeleyo kwi iihagu zomkhuhlane wengulube .
Emva kweminyaka embalwa yokuqulathiweyo, uMaddox ubuyile ngendlela enkulu. Kutshanje, wakhile ipodcast eyaziwayo kakhulu , Ijelo le-YouTube kwaye uhlala ethatha amajelo eendaba ukuba awaphendule amabali ahlaselayo ngokusweleka kukaRobin Williams , Umkhwa ombi weBuzzFeed wokuba umxholo , kunye Ukuthambekela kweendaba kukonyusa ingqumbo .
Ukuba ubundixelele xa ndandikwishumi elivisayo, xa abahlobo bam babephethe izincamathelisi zikaMaddox ezimotweni zabo kwaye sonke sinomdla wokuncokola nge-AIM, ndiza kuba nodliwanondlebe naye ngaphezulu kweshumi leminyaka kamva okanye ngamanye amaxesha ukubhala kwakho, ngekhe ndikukholwe. Kodwa silapha. Ukuqhubeka nothotho lodliwanondlebe olunamazwi anempembelelo kunye nokuqonda ekusebenzeni kwangaphakathi kweendaba zosasazo zanamhlanje, ndaye ndazama ukubuza uMaddox iingcinga zakhe malunga nokuxhaphaza imithombo yeendaba, ezinye zewebhusayithi zakhe azithandayo, kunye ne-porn.
Ke ubenjalo enye yezona zinkulu kwaye zokuqala abagxeki beBuzzFeed - ayisiyiyo nje into yoluhlu olucaphukisayo kunye nostalgia trolling kodwa kunye nomxholo abawubayo kubadali abanjengawe. Iminyaka embalwa kunye nezigidi zeedola kwinkxaso-mali kamva ucinga ntoni ngayo ngoku?
Zimbi kakhulu. Ndifunda nje iigripes zabasebenzi beBuzzFeed endibaziyo ngokobuqu, ababekhalaza ngokunganikwanga ngetyala ngokubhala, ukuvelisa okanye ukuhambisa nayiphi na iividiyo zabo. Oko ndibhale isiqwenga sam sokuqala malunga neBuzzFeed, uninzi lwabahlobo bam bafumene ingqesho kwiiofisi zabo zaseLos Angeles, apho bavelisa khona umxholo wabo wevidiyo. Indawo ayisiyiyo kuphela indawo ethatha ikhredithi ngezinto ezivela kwezinye iiwebhusayithi, iBuzzFeed ayikhange ibole abasebenzi babo ngomxholo abayenzileyo ngokusemthethweni. Ezi khredithi azibalulekanga nokuba, kuba uninzi lwabahlobo bam badibanise imisebenzi ngokusekelwe kwiikhredithi zabo kwiiprojekthi ezincinci zewebhu. Xa iBuzzfeed ipapasha umxholo, umdali, kuzo zonke iinjongo kunye neenjongo, umbutho weBuzzFeed. Njengomhlobo obonakalise ngokufanelekileyo, i-anyanisi ayenzi ngetyala ngababhali, kodwa ngumbutho weendaba ezihlekisayo ngelixa iBuzzFeed ingekho. Isizathu esipheleleyo seOnion sokukhoyo sisatire kunye nenqaku lokujonga elomeleleyo, ngelixa iBuzzFeed's yesizathu sikhona… ukuvelisa ingeniso yentengiso kunye nokukukhohlisa ekubeni ucofe umxholo wabo. Omnye uyenza ngenxa yezwi lakhe, omnye ngokungazi, ukubawa okanye ububi.
Kwakukho umfanekiso odumileyo owawuthathayo Kunyaka ophelileyo emva kokubhubha kukaRobin Williams nge-ABC eqhuba imifanekiso enganambithekiyo ekhayeni lakhe. Ekugqibeleni, ujolise kwi-CEO kwaye kuye kwafuneka baxolise bayeke. Ngaba ucinga ukuba khange uthethe nto, ngaba bekukho umntu onomdla? Ewe kunjalo, iqela lezinye iivenkile zikwabile emva koko. Ndicinga ukuba awucingi kakhulu kulo lonke ulwakhiwo?
Ukuba andikhange ndibhale loo juxtaposition ye-real-time helikopta kwiphepha elifanayo nesicelo sosapho sakhe soxolo ngexesha losizi lwabo, kunokwenzeka ukuba omnye umntu angabona into efanayo, mhlawumbi nakwi-ABC News. Nangona kunjalo ukuba ibiyinto yokugqibela, kukho isixa esikhulu soxinzelelo lwangaphakathi ukuba ungazenzi iingxaki ezinje ngeli leri yomdibaniselwano. Ngokuyintloko, inyani yokuba umphathi wakho une-ego kunye nomphathi wakhe; ukubonisa impazamo enje kunokumhlazisa kwaye ekugqibeleni kukuchithe umsebenzi, okanye ubuncinci, ukunyusa okanye ukunyusa. Ngaba ungayifaka emngciphekweni? Hayi, kungcono ujonge kwelinye icala. Unamatyala omele ukuwahlawula nemilomo yokondla. Kutheni usigungqisa isikhephe? Vumela loo madhole Maddox ayenze.
Mna nawe sixelele ngezinye ze ukugubungela okungcolileyo kokuvuza kwe-celeb kwaye ke isiciko somntu wesigcawu / somfazi . Ngaba ucinga ukuba aba bantu bayakhathala? Okanye ucinga ukuba ukuzenza ngathi uphambene — ukucaphukisa nokucaphukisa abanye abantu — yindlela ekhawulezayo yokufumana izithuthi?
Zintathu izizathu zokudlala ezithi, xa zidityanisiwe, zenze i-Captain-Planet-esque superhero yeenjongo ezintle zokucaphuka: Isizathu sokuqala kukuba ingqumbo yobulungisa iziva ilungile. Siphila kwixesha loxolo olulinganiselweyo apho singena sathana mkhulu njengobukomanisi okanye i-fascism yokwalatha njengomthombo wazo zonke iingxaki zethu. Bafuna unobangela ongenguye owenkolo kuba ukukholelwa kwizinto akusapholi, ke ukufumana intshaba abaziva ngathi bayithiyile kwaye besola ibenza bazive befuneka. Okwesibini, Kukho intshukumisa yemali. Kunenzuzo kakhulu ukufumana olo nqakrazo luza kwiwebhusayithi yakho. Ingqumbo lishishini elikhulu. Okwesithathu, ndinentlekisa, ndingenako ukukulahla ngokupheleleyo ukuba kungenzeka ukuba abanye baba bantu bakhathalele. Nangona kunjalo, i-idiocy yabo eneenjongo ezintle ihlala i-myopic, ibangela ingozi engaphezulu kunokulunga.
Kutheni le nto amajelo osasazo kufuneka abhekise kuwo onke amahlazo njenge-BLANK-gate? Yintoni ongathanda ukuyenza?
Sisisixhobo sonxibelelwano esonqenayo esisetyenziswa ziintatheli njengesifutshane kule nto yehlazo. Ndingathanda ukuba bakubize kanye oku: ihlazo. Nangona #GamerScandal ayinayo indandatho efanayo kuyo. Ndicinga ukuba iyacaphukisa kuba iyasikhathaza njengababhali ukwazi ukuba intatheli eyonqenayo icinga ukuba babekrelekrele besebenzisa isimamva ukufumana umxholo. Lugqatso olusezantsi ukubona ukuba ngubani na onako ukwenza igama elisetyenzisiweyo ukuchaza ihlazo leyure, kungakhathalelwanga ububanzi, umda okanye umxholo womcimbi. Umzekelo, isimamva sasetyenziselwa ukurekhoda zombini iPardongate, impikiswano ejikeleze uxolelo lukaBill Clinton lwabantu abali-140, kunye noNipplegate, xa uJustin Timberlake eveza isifuba sikaJanet Jackson ngexesha lomboniso wexesha leSuper Bowl. Nangona okokugqibela kuye kwabangela ukungasebenzi kakuhle kweewadi.
Sitshele malunga nokutya kwakho kweendaba. Ufunda ntoni? Ngubani omthembileyo? Ngoobani abantu abafanele ukuhlala kude nabo? Yeyiphi eyona ndawo intle emehlweni akho?
Iindaba zam endizithandayo ziindaba zikaGoogle. Ibonisa iintloko ezivela kwiivenkile ezahlukeneyo zeendaba zamabali athandwayo, ukuze ubone ngokujonga ukuba yeyiphi imibutho efuna ukujikeleza ibali. Umzekelo, xa ingxelo ekhokelwa yi-GOP malunga nehlazo le-Benghazi (isango le-Benghazi ngokufutshane) yakhutshwa, iiwebhusayithi ezinamaphiko ekunene ezifana neFox News zabhala izihloko ezinje, abenzi bomthetho be-GOP, abasindileyo be-Benghazi batshisa ingxelo yeNdlu ngelixa imibutho yeendaba ezisekhohlo kwiziphumo, usebenzisa amagama afana ne-debunked ukuchaza ihlazo. Ndithatha inyani ihlala kwindawo ethile phakathi kwaye ndizama ukufunda zombini iwebhusayithi ezisekhohlo nasekunene zeendaba. Nangona ndimfutshane ngexesha, ndinomkhethe kwi-BBC okanye kwi-NPR. I-dryer kunye neendaba ezithandekayo, zihlala zibhetele. Susa iinjongo zenzuzo kwiindaba, nokuba zisebenza ngokubambisana okanye zomsindo, kwaye uya kufumana iindaba ezilungileyo.
Ukuma kwakho kwangethuba malunga nokungathathi intengiso kwindawo yakho-kuba kuyakutshintsha indlela obhale ngayo-kube nefuthe kum. Ayisiyo eyokubhala kwam kuphela, kodwa yandinceda ukuba ndibone ubuqili kodwa into ebalulekileyo yokulwa imodeli yeshishini enokuthi ibe nayo ( endibhale ngayo kakhulu kwincwadi yam ). Ngokucacileyo, imbali iqinisekisile izimvo zakho apho-indawo enkulu yesizathu sokuba inkcubeko ye-intanethi yoyikeka ngenxa yentengiso ye-CPM. Ibe njani le nkqubo kuwe? Ngokucacileyo, kubiza imali eninzi kodwa ngaba wonwabile kukhetho? Kuthekani ngoku ngeevidiyo zakho, ezongezwe ngeendlela ezithile?
Ukhetho lokupapasha kulwimi oluxhaswa ngemali yintengiso, enje ngeYouTube okanye ipodcasting, yandisinda kakhulu. Ndisilinganisile isigqibo ngokugcina isithembiso sam sokuba ndihlala ndikhona gcina iwebhusayithi yam ebhaliweyo ingenazintengiso ukuba ne-outlet yokuvakalisa izimvo zam eziya kuhlala zingenamdla kumdibaniselwano kunye nokuzimela okulandelayo. Ngokudibanisa ubhontsi wam kumajelo axhaswe ngemali yintengiso, ndiyayixabisa inkululeko ekufuneka ndiyithethile endiyifunayo kakhulu. Ndihlala ndikhathazekile ngento endinokuyithetha okanye ndingakwaziyo ukuyithetha xa umntu ehlawula amatyala. Ukungabinayo injongo yokufumana abantu ukuba bacofe iwebhusayithi yam kundivumele ukuba ndinyaniseke ngakumbi njengombhali. Akunyanzelekanga ukuba ndibhale ilisticle ukuze abantu bacofe kuba andenzi mali kuloo ndlela. Ngeliphandle, ukugcwala ngakumbi okuza kwiwebhusayithi yam, kokukhona kuya kufuneka ndibhatele epokothweni ukulungiselela abo bafundi. Impumelelo iyandohlwaya.
Imodeli engenazintengiso indincedile ngenye indlela: ukuba ndincoma into, abantu bayandithemba kuba bayazi ukuba andizibhengezi kwaye andinasizathu sokudumisa into endingakholwanga yiyo. Yindlela enamandla kakhulu yokuthemba loo mali ngokoqobo ayinakuthenga. Ndiziva ndikhululekile ngesigqibo sam. Luhlobo oluthile lokuzibandeza uyolo oluye lwandibeka ebunzimeni maxa wambi ngokwezezimali, kodwa ukuzincama kukhokelele kukuxabisa okukhulu into endiyenzayo.
Ucinga ntoni ngepodcasting njengesixhobo esiphakathi? Inomzuzwana apha kwaye Uye waxhuma kuyo ngendlela enkulu . Ndiyakhumbula ukuba wazama inkqubo kanomathotholo noSirius, yeyiphi iminyaka eli-10 eyadlulayo ngoku? Uyibona phi le nto? Ngawaphi amathuba ekunika wona?
Ngaphandle kwe-etymology enxulumene ne-Apple enegama, ipodcasting yeyona nto iphambili kwaye likhaya elitsha kwirediyo yokuthetha. Ndiqale ukumamela ukuthetha xa ndandineminyaka eli-12 ubudala, ndaye ndadana kukubona ukubhubha kwazo zonke iingxilimbela zikanomathotholo. Xa izitishi zokugqibela ze-AM kunye ne-FM zazidilika, i-baton yadluliselwa kwi-podcasting, ukuqala ngo-Adam Carolla. Wayengomnye wokuqala ukwenza utshintsho olunempumelelo kuhlobo olutsha kwaye uchume. Ukuma kwam okufutshane noSirius kwakumnandi, kodwa akuzange kuhlale ixesha elide kuba mhlawumbi babebaninzi abapheki ekhitshini.
Iindleko zokungena kwi-podcasting ziphantse zangabalulekanga, kodwa eliphakathi liqala ukwanela kwaye indlela eya empumelelweni inzima ngakumbi. Eyona nto ilungile, kuba ii-podcast eziphumelelayo zihlala zezona zilungileyo, ezenziwe ngabantu abafanelekileyo- uhlobo lwabantu abaphikelelayo kunye nokwenza ubugcisa, nokuba akukho mntu umameleyo, kuba bayakuthanda ukuyenza. Inosasazo lwentando yesininzi, kwaye yenze ngendlela ekhululekileyo kwimbonakalo yentengiso. Ubuncinci ekuqaleni. Ikamva eliqaqambileyo.
Lo ayingombuzo weendaba konke konke, kodwa ndothuswe ngokwenene kukufunda xa sasilindile kulo nyaka uphelileyo ukuba ukhwele ibhayisekile. Andizange ndimbone uMaddox kwibhayisikile. Yintoni enye esingayaziyo?
Ngokwenene andiyityi itoni yenyama ebomvu (inyama yenyama). Nangona ndizama ukufumana i-Korean okanye i-American BBQ ubuncinci kanye ngenyanga. Andisoze ndincame ibhayisekile yam nangona. Eyona ndlela ikhawulezayo edolophini ngexesha lokugcwala kwabantu, iqinisekisiwe. ndisa cebisa isiqendu sakho ebantwini njengezona zilungileyo kubaphulaphuli abatsha. Eyakho kuphela kwengxaki yeendwendwe ukuyenza ikuluhlu lwe-10 ephezulu. Sisaqhubeka nokubhekisa ingxaki yakho ngalo lonke ixesha. Ndingathanda ukuba uphinde ubuye. Enkosi ngale mibuzo yodliwanondlebe, bekumnandi. Ndifuna ukuyithetha le nto phezulu kodwa ndingafuni kuvakala ngathi sisangqa, kodwa ndiyayixabisa into ebhaliweyo kwaye ndicinga ukuba iyaqondakala kwaye ibhalwe kakuhle. Sicinga ngokufanayo kwizinto ezininzi, kwaye bambalwa ababhali endiza kuthi malunga nabo.
URyan Holiday ngumbhali othengisa kakhulu Ndithembe, ndiyaxoka: Ukuvuma koMlawuli weendaba . URyan ungumhleli-omkhulu we-Braganca, kwaye Uhlala eAustin, eTexas.
Udibanise nalento Uluhlu lweencwadi ezili-15 ukuba awuzange uve ukuba iya kutshintsha umbono wakho wehlabathi, ikuncede ugqwese kwikhondo lakho kwaye ikufundise indlela yokuphila ubomi obungcono.
I-Uber Tosses Iimoto ezihamba ngenqwelo moya kunye nokuziqhubela ngokwakho ukuGxila kwiShishini eliPhambili
Ufika njani kwiiyure zokulala ezine ukuya kwezintlanu
Umkhohlisi ongumyili! Ityala leDubious Dolce kunye neGabbana Dude
'Gxotha kude' nge-20: Ngaphakathi kweTom Hanks Classic kunye neReal Wilson
uludwe lweewebhusayithi zokuthandana kwi-Intanethi
Iimhlophe ziguqulela inombolo yokukhangela yefowuni
Iimfazwe zeenkwenkwezi ezithengwe yidisney
kungcono ubize uSaul kwisizini ephelileyo
yicon o brien gay